Google na-aga n'ihu ịkụ nzọ na Android Pay | Akụkọ akụrụngwa
Ọnwa ole na ole gara aga, anyị nwetara ezigbo mmụba na ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ ekwentị, ọganihu nke malitere n'ihi Apple Pay na onye ọ bụla chọrọ i imitateomi ma taa enwere ọrụ ole na ole echebere ma ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta ha. Apple Pay na Samsung Pay bụ nnukwu ọrụ ịkwụ ụgwọ ekwentị abụọ, mana Kedu ihe mere gam akporo Pay? Google a ka na-arụ ọrụ na ya?
Eziokwu bụ na ugbu a anyị natara ozi banyere Android Pay na ọ bụghị nanị na-ana achi achi a oké ojiji kamakwa certifies na Google na-aga n'ihu nzọ na ya.
Ihe mbu anyi mara bu na Chrome 53 ga-enwe Android Pay native, nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịzụta site na web wee jiri otu pịa pịa, ihe ga - etinye Paypal n’ọnọdụ siri ike Ọfọn, na mpaghara a, Paypal bụ eze. N'oge a anyị amaghị ọtụtụ ihe banyere njikọta a, mana amaara na Google na Chrome ga-echekwa kaadị akwụmụgwọ anyị ka onye ọ bụla ghara iji data a na ihe nchọgharị weebụ.
Chrome ga-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ site na weebụ yana gam akporo Pay
Akụkọ ndị ọzọ ga - eme ka ọtụtụ narị puku ndị ọrụ dabere na gam akporo Pay bụ njikọta ahụ Google na Uber mere. Ya mere, ruo ọgwụgwụ nke October onye ọ bụla Ndị ọrụ Uber na-akwụ ụgwọ site na Android Pay ga-enwe mbelata 50% na ọnụahịa nke njem ha, ihe na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ Uber na-eji ya eme ihe mgbe niile. Onyinye a metụtara naanị United States na anaghị akwado Kupọns ego. Ee, amaara m na ọ naghị emetụta Spain, mana eziokwu bụ na ihe ịga nke ọma nke Apple Pay na Samsung Pay abụghị na Europe ma na United States ma site n’ebe ahụ ọ na-aga n’akụkụ ụwa ndị ọzọ. Ya mere, ọ dị mma ịmara ma mara ihe ga-eme n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ.
Ihe yiri ya ga-eme na Europe, mana Jiri ozi dị a ?aa? Ga-akwụ ụgwọ gam akporo ịkwụ ụgwọ na Chrome n'otu ụzọ ahụ? Ego ole ka onyinye ndị a ga-apụta nye igbe Google?
N'ọnọdụ ọ bụla, bịa ma ọ bụ abịa, android Ṅaa Ọ bụ ọrụ ọhụrụ nke Google nzo na anyị masịrị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nọ ebe a ka ị nọrọ. Ma Ọ ga-emeri Apple Pay na Samsung Pay?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Google na-aga n'ihu ịkụ nzọ na Android Pay
Ihe ngosi ohuru nke Samsung gosiputara ekwenti nwere ike igba Windows na Android n’otu oge